Tani waa bac aad u yar oo la qaadan karo oo ah bac qaboojiye aan biyuhu lahayn, oo leh awood dhan 8 gasacadood iyo 840D-TPU wax. Markaad rabto hal-abuurnimo gaagaaban, waxay noqon doontaa dookhaaga ugu fiican.
Shayga No: BD-001-39
Awood: 8macaan / 6L
Faahfaahinta 295 * 210 * 280mm
Qalabka tayada-sare leh ee 840D-TPU oo tayo sare leh ayaa kuu oggolaanaya inaad wax walwal ah qabin marka aad ciyaareyso.
Jirka is haysta wax culeys ah kuma kordhinayo tacabirka, kaliya wuxuu noqonayaa kaaliyahaaga ugu fiican.
Awooda 8 daasadood ayaa hubaal ah xulashada ugu fiican safarkaaga maalinta. Waxaad soo qaadan kartaa waxyaabo badan adigoon culeys kugu noqon.
Cuntada ha ahaato mid qabow
Khatimidii, Waaraa, Caymiska
Hawlo kaladuwan, isticmaalka muuqaalka badan
Kaydinta kuleylka ee hufan waxay socon kartaa illaa 72 saacadood
Aqoon-isweydaarsiga Wax-soo-saarka Xirfadeed
Aqoon isweydaarsiga boodh la'aanta ah wuxuu hubiyaa nadaafad buuxda. Dhamaan shaqaaluhu waa inay xirtaan dharka shaqada iyo daboolka kabaha markay soo galayaan aqoon isweydaarsiga, ayna si adag u kantaroolaan tayada wax soo saarka.
Aqoon isweydaarsiga wax soosaarka ee isku dhafan, laga bilaabo daabacaadda alaabta ceyriinka ah ee kormeerka alaabooyinka la dhammeeyay, waxaa si madax bannaan u dhammaystiray shirkadda, si tallaabo kasta oo wax soo saar si adag loo xakameeyo.
Aqoon isweydaarsiga wax soo saarka hufan wuxuu awood u leeyahay inuu aqbalo tiro badan oo amarro ah, iyadoo la hubinayo waxtarka iyo tayada.
Marabtaa inaad u kicitimo xiisaha kalidaa? Ama safar gaaban la gal asxaabta? Qalabka TPU ee aan biyuhu lahayn, awoodda daasadaha 8. BD-001-39 boorsada qaboojiyaha ayaa ku habboon isticmaalka shakhsi ahaaneed ama xiisaha gaaban. Boorsada qabow ee BD-001-39 waxay sameyn kartaa tacabud gaaban. Bacdan yar ee qaboojiyaha jilicsan waxay bixin kartaa dhammaan waxqabadka bacda jilicsan ee jilicsan, adoo ilaalinaya cuntadaada iyo cabitaankaaga mid cusub oo qabow. Naqshadeynta suunka garabka ayaa aad ugu habboon in la isticmaalo marka ay jiraan ugu yaraan masaafad socod inta lagu jiro safarka. Waxa kale oo jira gacan qabasho oo la qaadi karo.
Hore: Bag Boorsada boorsada aan biyuhu lahayn
Xiga: Camping Ice meeldhexaadka ah biyuhu
Bac Bag meeldhexaadka ah
Bac qaboojiyaha la qaadan karo
Boorsada Qaboojiyaha Safarka
1L / 1.5L / 2L / 2.5L / 3L Kaadiheysta Kaydinta Biyaha Dibadda
Boorsada Boorsada Biyaha La qaadan karo
Kaydka Bilaashka ah ee Biyaha Deegaanka BPA